RFID Crystal Epoxy Tag ကိုထုတ်လုပ်မှု, crystal Epoxy Card ကို, crystal Epoxy Key ကို Tag ကို, မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းဆွဲပြား Tag ကို, NFC ကို Crystal Epoxy Tag ကို, crystal Epoxy NFC ကို Tag ကို
NFC ကိုထုတ်ကုန်များ, RFID Crystal Epoxy Tag ကို crystal Epoxy Card ကို, crystal Epoxy Key ကို Tag ကို, crystal Epoxy NFC ကို Tag ကို, Crystal Epoxy Smart Tag, မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းဆွဲပြား Tag ကို, NFC ကို Crystal Epoxy Tag ကို, RFID Crystal Epoxy Tag ကိုထုတ်လုပ်မှု
RFID Crystal Epoxy Card ကို, NFC ကို Crystal Epoxy Tag ကို, ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး Customize. ပုံစံများ print ထုတ်နိုင်မလား, လိုဂို, အမှတ်စဉ်နံပါတ်များကို, QRcode, နှင့်ပိုပြီး.
ထက်ပိုပြီး 300 မှိုတာဝန်ခံအခမဲ့သုံးနိုငျ.
IC chip ကို: EM4100, EM4102, TK4100, EM4305, MF1K S50, MF4K S70, ULT, T5577, NTAG203, ဂြိုလ်သား h3, etc.
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 860 ~ 960MHz
ပရိုတိုကောနျ Standard: ISO ကို 11785, ISO ကို 11784, FDX-B က, ISO ကို 14443 TypeA / B,, ISO ကို 15693, ISO ကို 18000-6C / 6B
R / W ကို Range: 5~ 10cm, အထိလှိုင်းနှုန်းသည် UHF စာဖတ်ခြင်းအကွာအဝေး 1 မီတာ
Operating အပူချိန်: -20ကို C ~ + 55 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ
ပစ္စည်း: ကို ABS / PVC + Epoxy ( ပျော့ / ခက်ခဲ )
တင်သွင်း crystal Epoxy လုပ်ထားတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပုံနှိပ်ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးသုံးပြီး crystal Epoxy Tags: ထုတ်ကုန်. anti-မြေမှုန့်, ရေစိုခံ, အဘယ်သူမျှမပူဖောင်း. ပွင့်လင်းမြင်သာမှု, ထိုကဲ့သို့သောဖန်အဖြစ်. ကောင်းသောသုံးခုရှုထောင်အသိ, မည်သည့်ပုံစံများအတွက်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်. ဖောက်သည်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုအဆိုအရကာတွန်းပုံစံမျိုးစုံအမျိုးမျိုးအောင်, တောက်ပသော, lifelike ပုံရိပ်, အားလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပရိုမိုးရှင်းများအတွက်စံပြရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်.
offset ပုံနှိပ်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းပုံစံများ, ပုံနှိပ်ကုဒ် (ရှေ, ငွေ, အနီေရာင်, ဝါသော, အနက်ရောင်), လေဆာရောင်ခြည်ကုဒ်, Two-ရှုထောင်ကုဒ်, ကုဒ်နှင့်အခြားနည်းပညာထွင်းထု.
Seabreeze Smart Card Co.,Ltd has its own automated Crystal Epoxy dispensing tag production equipment, အရည်အသွေးကိုအာမခံချက်နှင့်ဖြန့်ဝေ. ကျော်ထံမှ Choose 400 ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပေး. RFID စမတ် chip ကိုအမျိုးမျိုးတို့ကို encapsulated နိုင်သလား, သို့မဟုတ် chip ကို encapsulated မဟုတ်. LF / HF / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF နှင့်အခြား RFID ကြိမ်နှုန်းသက်ဆိုင်.
Easy to carry, လှသောအဆင်း, ကြာရှည်ခံသော, ရေစိုခံ, မျက်နှာပြင်ဝတ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်.
အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, အချိန်တက်ရောက်သူ, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, တဦးတည်းကဒ်ဖြေရှင်းချက်, ဘတ်စ်ကားအသွားအလာကဒ်, trans ဆိုတဲ့ကဒ်, ကားတစ်စီးပန်းခြံတွေအများကြီး, လက်မှတ်တွေ, ထုတ်ကုန်ဖော်ထုတ်ခြင်း, ကျောင်းကစီမံခန့်ခွဲမှု, အသိုင်းအဝိုင်းန်ထမ်းများရဲ့အထောက်အထားစီမံခန့်ခွဲမှု, ကလပ်အဖွဲ့ဝင်စီမံခန့်ခွဲမှု, တစ်ဦးလက်မှုပညာလက်ဆောင်ကဒ်အဖြစ်ကိုလည်းတင်ပြနိုင်ပါတယ်.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် RFID Crystal Epoxy Card ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, NFC ကို Crystal Epoxy Tag ကို
prev: custom NFC ကိုစတစ်ကာများ, ကော်စက္ကူနှင့် Ferrite အလွှာနှင့်အတူ NFC ကိုဆန့်ကျင်သတ္တု Tag ကို
နောက်တစ်ခု: NFC ကိုဖျ Silicon လက်ပတ်, NFC Intelligent Proximity Silicone Wristband